Voadika ny 05 Febroary 2013 10:47 GMT
Notorian'ny sampam-pitsikilovana ambony ao Korea Atsimo ho nanala-baraka azy ilay psykôlôgy mpahay lalàna Pyo Chang-won. Tamin'ny lahatsoratra farany navoakany [ko] tao amin'ny gazety mpanohana ny ankavia, namely ny Sampam-pitsikilovana Nasionaly Koreana (NIS) i Pyo, noho ny fanadihadiana notontosain'izy ireo tamin'ny mpiasa voalaza fa nanao asa tsy ara-dalàna nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Niampanga azy ireo ho manompo ny fahefana mpanao politika ho amin'ny tombotsoan'izy ireo ihany koa izy ary niantso azy ireo ho “tsy manam-pahaizana” sy “tsy mahavita azy”.
Niampanga ity fitoriana [ko] ity ho fanaovana fandrahonana amin'ny olom-pirenena hifanaraka amin'ny [fihetsiky] ny governemanta ny vondron'antoko demokratika . Azo jerena ao amin'ny tontolon'ny Twitter Koreana-Atsimo ny fanehoan-kevitra sahala amin'izany. @blu_pn nanoratra hoe [ko]: